Vaovao - Angel Garment Accessories Co., Ltd.
Jacquard aorian'ny fisehoan'ny kofehy fatratra telo-refy, jacquard lamina fihantsiana, tsy deformation mihitsy. Brac jacquard, logo hita mazava, loko mamirapiratra, tena kilasy, tsy afaka mampitombo ny fanampiny sanda vokatra, dia afaka manatsara ny marika sary .Ny endrika jacquard tsy manam-paharoa......
ireto misy fomba roa lehibe handokoana kofehy lamba. Ny iray dia ny fandokoana be mpampiasa indrindra (fandokoana mahazatra), izay natao hitsaboana ny tadin'ny lamba amina vahaolana anaty loko simika. Fomba iray hafa ny fampiasana loko, izay amboarina ho potika kely tsy mety ritra afaka miraikitra a......
Fomba famonoana olona ampiasaina amin'ny fitaovana webbing:
Ahoana ny famaritana ny hainganan'ny loko amin'ny webbing? Fitsipika fenitra momba ny hainganan'ny loko amin'ny webbing